ရေးခြစ် ulator Emulator.online မှ ၀ င ်၍ ခံစားပါ
သော့။ ရေး ။ မည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုဝေါဟာရတိုးတက်စေရန်မှာအပ်နှံရန်လိုအပ်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဒီခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုကူညီဖို့ပျော်စရာကောင်းပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုသင်ယုံကြည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကော။ ၎င်းသည် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သောအမေရိကန်စကားလုံးဂိမ်း Scribble အကြောင်းဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ဘာသာစကား ၂၂ ဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
ရေးခြစ် - တစ်ဆင့်ချင်းမည်သို့ကစားရမည်နည်း။
ကစားရန် backgammon အွန်လိုင်းအခမဲ့၊ ဤအအဆင့် -by-step ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ :
အဆင့် 1 ။ သင်နှစ်သက်သောဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ဂိမ်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ emulator.online.
အဆင့်2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသပြီးပြီဖြစ်သည်။ သင်စတင်ကစားရန်နာမည်တစ်ခုရွေးရမည်။ သင်လိုချင်လျှင်ပုံတစ်ပုံကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ နှိပ်ပါ ကစားရန် " နှင့်သင်ကစားနိုင်သည်၊ စက်ကိုဆန့်ကျင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သူငယ်ချင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်မကကိုဆော့ကစားပါ။
4 အဆင့်။ ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်သင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်စကားလုံးများကိုဖန်တီးရမည်။ အက္ခရာတစ်ခုစီတွင်ရမှတ်တစ်ခုစီရှိသည် ။ ပွဲအဆုံးတွင်ရမှတ်အများဆုံးရရှိသောသူသည်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
Scribble သည်၎င်း၏ကစားသမားများ (၂-၄) ကို စုစည်း၍ အမှတ်များထည့်ရန်ကြိုးစားသည့်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောစကားများ , သို့ခွဲခြားဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အက္ခရာကျောက်ခဲတို့ကိုအသုံးပြု 225 ရင်ပြင် .
လူများစွာက Scribble တီထွင်သူများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် ဂျိမ်း brunot နှင့် ဟယ်လင်ဘရူနို ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့အဲဒါကသူတို့ရဲ့အတွေးမဟုတ်ပါ Scribble ကိုတီထွင်သူသည် Alfred Butts ဖြစ်သည် နယူးယောက်ခ်ရှိ Poughkeepsie မှဗိသုကာတစ်ယောက်။
ယခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် 1931 အသစ်စက်စက်အလုပ်လက်မဲ့များနည်းတူ Butts တွင်အချိန်များစွာရှိသည်။ သူကကံကောင်းခြင်းနှင့်စွမ်းရည်အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူတည်နေသည့်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Alfred Mosher Butts သည် New York Times သတင်းစာ၏ရှေ့စာမျက်နှာများကိုဖတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်တိကျသောအက္ခရာများကိုမည်မျှပေးသည်ကိုတွက်ချက်ခဲ့သည် (သို့သော်သူကကစားရန်အလွန်မလွယ်ကူစေရန် "S" ၏ဖြစ်ပျက်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်) ယင်း၏ရှားပါးအပေါ်အခြေခံပြီးတစ် ဦး ချင်းစီမှတန်ဖိုးချီးမြှင့်။
Crossword ၏အစီအစဉ်အရကြွေပြားများကိုစီစဉ်ပေးသောကြောင့်မည်သည့်ဘုတ်အဖွဲ့မှမလိုအပ်ပါ။ သူကဒီဂိမ်းနာမည်ကိုပေး၏ အဘိဓာန် .
သူ၏မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံခြင်းမရှိသလိုဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများကိုလည်းစိတ် ၀ င်စားခြင်းမရှိသောကြောင့် ၁၉၃၈ တွင်သူသည်ဂိမ်းတစ်ခုကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည် 15 x ကို 15 ဘုတ်အဖွဲ့ high- ရမှတ်ရင်ပြင်နှင့်အတူ ခုနစ်ချောင်း lectern (ကျန်ရှိနေသေးသောအင်္ဂါရပ်များ) ။ ။
သူလည်းအမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် Criss- စကားလုံး , ဒါပေမယ့်တစ်ဖန် မူပိုင်ခွင့်ရုံး နှင့်ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများဘာမှမသိချင်ကြဘူး။ အနည်းငယ်ပြီးစီးပြီးနောက်သူသည်ဗိသုကာပညာအဖြစ်ယခင်အလုပ်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။
1948 ခုနှစ်တွင်ဂျိမ်းစ်ဘရူနို ဂိမ်းအနည်းငယ်၏ပိုင်ရှင်ကသူသည်၎င်းကိုအောင်မြင်စွာဈေးကွက်တင်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မူပိုင်ခွင့်လဲလှယ်သည် Brunot မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကိုဝယ်ယူခဲ့သည် .
ငါဆုရင်ပြင်များပြန်လည်ဝေမျှ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရိုးရှင်းတဲ့နှင့် အမည်ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည် သော့။ ရေး , အရာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာပင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်ဂရိတ်ဗြိတိန်တွင်ကုန်သွယ်ခဲ့သည် .
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင်အိမ်မှအလုပ် လုပ်၍ သူသည်ဂိမ်း ၂,၀၀၀ ကျော်ကိုရောင်းခဲ့သည်။
Macy ရဲ့စတိုးဆိုင်မှမန်နေဂျာဖြစ်သူဂျက်စထရတ်သည်အားလပ်ရက်တွင်ကစားခဲ့သည်။ သူပြန်လာသောအခါသူသည်သူ၏ဂိမ်းဌာနကို၎င်းတို့ကိုအချို့ကိုပို့ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်၊ သို့သော်စတော့မရှိ။
Macy's သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုစတင်ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ Brunot သည်ရောင်းအားများပြားလာခြင်းကိုမနှောင့်ယှက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုလိုင်စင်ချထားခဲ့သည် Selchow & Righter ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ကနေဒါနှင့်Australiaစတြေးလျတို့၏ပြင်ပရှိအခွင့်အရေးများကိုဗြိတိသျှကုမ္ပဏီ JW Spears သို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ပထမဆုံးမူပိုင်ခွင့်ကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်သာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမူကွဲများလိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာအက္ခရာများ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အက္ခရာများပင်ကွဲပြားနိုင်သည် (ဥပမာ၊ စပိန်တွင် LL နှင့် CH အက္ခရာများရှိသည်) ဂိမ်းပေါင်းသန်း ၁၀၀ ကျော်ကိုဘာသာစကား ၂၉ မျိုးဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဂျိမ်းစ်ဘရူနိုသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
သော့။ ရေး နှစ်ခုမှလေးကစားသမားများအကြားနံပါတ်အားဖြင့်ကစားနိုင်ပါတယ် .
ဘေးထွက်မှာ 15 ရင်ပြင်နှင့်အတူစတုရန်းဘုတ်အဖွဲ့ရှိပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် A (သို့) အေနှင့်အနီးဆုံးစာကိုယူလျှင်ဂိမ်းစတင်သည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်သူ၏လက်၌အက္ခရာခုနစ်လုံးကို သုံး၍ စကားလုံးတစ်လုံးကိုဖွဲ့စည်းနိုင်လျှင်သူ အလိုအလျှောက်ရမှတ် 50 မှတ် .
Scribble တွင်စာလုံးများကိုတည်ဆောက်ခြင်းသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ မဟာဗျူဟာသည်စာလုံးအကြီးများနှင့်ကောင်းသောရင်ပြင်များဖြင့်အချက်များကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းအက္ခရာများအဆုံးသတ်ပြီးအားလုံးကစားသမားများနောက်ဆုံးအပြောင်းအရွေ့လုပ်သောအခါအဆိုပါဂိမ်းသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ကစားသမားတစ် ဦး စီလက်ထဲတွင်ရှိနေသည့်အချက်များကိုသူတို့စုစုပေါင်းမှနုတ်ပစ်သည်။
အကယ်၍ ယနေ့အထိထုတ်လုပ်ခဲ့သော Scribble အပိုင်းအစအားလုံးကိုဘေးချင်းယှဉ်။ ထားခဲ့ပါက၎င်းသည်ကမ္ဘာမြေကိုရှစ်ကြိမ်ဝန်းရံနိုင်သည့်စဉ်ဆက်မပြတ်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်အန္တာတိကတိုက်ရှိစစ်သား (၂) ဦး သည် Scribble ကို (၅) ရက်ဆက်တိုက်ကစားခဲ့ရသည်၊ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
•ကိန်းဂဏန်းများအရနာရီပေါင်း ၃၀,၀၀၀ စာဖြင့်ဂိမ်းများကိုစတင်သည်ဟုဆိုသည်။
• Scrabbrle ကိုနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သောဘာသာစကားမှာဝလေဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမူ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
• ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်မြောက်အမေရိက၏တရားဝင် Scribble အဘိဓါန်အဘိဓာန်သည်ညစ်ညမ်းသောစကားများနှင့်လူမျိုးရေးစကားလုံးများအားလုံးကိုတားမြစ်ခဲ့သည်။